Xukun Degdeg ah oo lagu soo rogay Itoobiya & Ciidamada oo la siiyay awood dheeraad ah. – Xeernews24
Xukun Degdeg ah oo lagu soo rogay Itoobiya & Ciidamada oo la siiyay awood dheeraad ah.
17. Februar 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa goor dhoweyd looga dhawaaqay in xaalad degdeg ah lagu soo rogay dalka Itoobiya.
Golaha Wasiirada Itoobiya ayaa maanta ilaa caawa shir ka yeeshay xaaladda dalka, kadib markii uu is casilay Ra’iisal wasaarihii Itoobiya Haile Marian Desalegn. Waxaana warbaahida dowladda ee EBC ay shaacisay in dalkaasi la geliyay xaalad degdeg ah.
Lama sheegin xilliga ay socon doonto xaaldan, waxayse wararku sheegayaan inay Golaha wasiirada ka doodeen saddex ama lix bilood inay socon doonto, iyadoo Baarllamaanka Itoobiya uu fasaxa kasoo laabanayo saddex bil gudahood.
Wararka ayaa sheegaya in xisbiga talada haya ee EPRDF uu go’aansaday in dalka Itoobiya lagu soo rogo xaalad amni, waxaana awood dheeraad ah la siiyey ciidamada dalkaasi oo ay xukumaan taliyeyaasha kasoo jeeda qowmiyada tirada yar ee Tigreega.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/02/xukun.jpg 168 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-02-17 00:10:572018-02-17 00:10:57Xukun Degdeg ah oo lagu soo rogay Itoobiya & Ciidamada oo la siiyay awood dheeraad ah.
Kadib Iscasilaadii Hailamariam Desalegn: Maxaa laga filan karaa xaaladda dalka... Tahriibayaal laga soo celiyey Liibiya oo kasoo degay Magaalada Muqdisho(Saw...